Xiddigaha Baxaya, Kuwa Joogaya Iyo Qorshaha Zinedine Zidane Ee Xili CIyaareedka Dambe - Gool24.Net
Xiddigaha Baxaya, Kuwa Joogaya Iyo Qorshaha Zinedine Zidane Ee Xili CIyaareedka Dambe
August 13, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Real Madrid waxay qorshaynaysaa in suuqa iibka ciyaartoyga ee xagaagan ay ka samayso lacag ku dhow 200 milyan oo Euro oo ah ciyaartooyo ay iibinayso, laakiin lama filayo suuqa u gasho sidii ay ciyaartooyo usoo iibsan lahaayeen, maadaama ay ka cabanayaan dhaqaale xumo uga timid Fayraska Korona iyo garoonka Santiago Bernabeu oo dhisme ay ku baxayso lacag ka badan 400 milyan oo Euro uu ka socdo.
Tababare Zinedine Zidane ayaan xisaabta ku darsanin inuu helo xiddigo cusub, waxaase uu u yeedhay saddex ciyaartoy oo amaah kaga maqnaa, waana Martin Odegaard, Dani Ceballos iyo goolhaye Andriy Lunin oo buuxin doona booskii uu banneeyey Areola oo dib ugu laabtay PSG.
Wargeyska Marca oo warbixin ka qoray xaaladda Real Madrid ee xili ciyaareedka dambe, ayaa waxa uu dul-istaagay ciyaaryahannada lama taabtaanka ah, kuwa xaaladdoodu dhinac walba u dhici karayso iyo xiddigaha suuqa la dhigayo ee laga soo saarayo lacagta 200 milyan ee Gini ah.
Goolhayeyaasha: Thibaut Courtois iyo Lunin waa lama taabtaan
Goolhayaha reer Belgium ee Thibatu Cortouis waxa uu ku guuleystay abaal-marinta Zamora Trophy ee goolhayaha ugu wanaagsan Spain xili ciyaarka 2019/20, waxaana uu xajisan doonaa booskiisa xili ciyaareedka dambe iyadoo uu gacan yare u noqon doono LUnin maadaama Alphonse Areola uu ku laabtay Paris Saint-Germain oo usbuucan lasii sagootiyey.
Difaaca: Waxay mar horeba kooxdu ka samaysay lacag dhan 48.5 milyan Euro.
Real Madrid waxay iibisay Achraf Hakimi oo Inter Milan ugu wareegay 40 milyan oo Euro iyo 5 milyan oo Euro oo kale oo ku xidhan bandhiggiisa. Waxa kale oo ay iibisay Javi Sanchez oo Real Valladolid ay ku qaadatay 3.5 milyan Euro.
Jesus Vallejo ayaa ogsoon in aanay waxba u oollin kooxda oo ay tahay inuu helo naadi kale, sidoo kalena waxa uu shaki ku jiraa Nacho Fernandez.
Khadka dhexe: Saddex kaliya ayaa la xaqiijiyey
Odegaard ayaa dib usoo laabanaya, waxaana uu soo macasalaameeyey Real Sociedad, laakiin isaga ka sokow, waxa xili ciyaareedka 2020/21 kalikya la xaqiijiyey oo damaanad ay kooxdu u haysataa inay sii joogayaan Toni Kroos, Fede Valverde iyo Casemiro.
Laacibiinta kale ee James Rodrgiuez, Isco iyo xataa Luka Modric ma sugna mustaqbalkooda xili ciyaareedka dambe.
Weerarka: su’aasha ugu xaasaasisan waa Bale
Gareth Bale lagama doonayo Real Madrid, waxaana warka u caddeeyey Zinedine Zidane oo qaybtii dambe ee xili ciyaareedkaba aan kusoo darsanin liiska xiddigihiisa.
Borja Mayoral oo muddo amaah ku maqnaa ayaa la filayaa inuu ku biiro Lazio, halka Lucas Vazquez uu isaguna tegi karayo.
Luka Jovic oo xili ciyaareed kadeed ah ku qaatay Santiago Bernabeu, waxa lala xidhiidhinayaa kooxo Talyaaniga iyo Ingiriiska ka dhisan.
Da’yarka reer Japan ee Takefusa Kubo ayaa isaguna xili ciyaareed amaah ah loogu diray Villarreal.